ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်မိခဲ့တဲ့ အန်တီကြီးသာ ပိုးတွေ့ရင် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ တစ်ပြုံကြီးပါပြီလို့ ပြောလာတဲ့ ကောင်းကျော် - Cele Gabar
ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်မိခဲ့တဲ့ အန်တီကြီးသာ ပိုးတွေ့ရင် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ တစ်ပြုံကြီးပါပြီလို့ ပြောလာတဲ့ ကောင်းကျော်
ဟာသလူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင်ကောင်းကျော်ကတော့ လတ်တလောကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်ကမှ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားမှု အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် လုပ်ငန်းတချို့ပြန်လည်စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အနုပညာလောကမှာလည်း ရိုက်ကူးရေးတချို့ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းကျော်ကတော့ ပွဲတစ်ခုမှာ မိသားစုလိုချစ်ခင်ရတဲ့အန်တီတစ်ယောက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲ့အန်တီကိုတော့ ရခိုင်က ပြန်လာတာ(၂)ပတ်ပဲရှိသေးတာကြောင့် ပိုးစစ်ဖို့ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိခဲ့ရချိန်မှာ သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ကိုင်း ဘုရားတရားသာ တကြပေရော့…. အန်တီနဲ့က သားအမိတွေလို ချစ်ခင်နေကြတော့ အမှတ်တရ ပုံလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ပေါ့ … ရခိုင်ကပြန်လာတာ နှစ်ပါတ်ဘဲရှိတယ်သတင်းကြားလို့ ဆေးစစ်ဖို့ လာခေါ်သွားပြီ ဆိုတော့ အန်တီရဲ့ ဆေးစစ်တဲ့ အဖြေကိုစောင့်ရတော့မှာပေါ့ …အန်တီမှာသာ covid ပိုးတွေ့ပြီဆိုလိုကတော့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ တစ်ပြုံကြီး အတွဲလိုက် ပျော်ပျော်ကြီး Q ဝင်လိုက်ကြယုံပေါ့ဗျာ… ကိုင်း ဘုရားတရားသာ တနေကြပေရော့ဗျာ ဟားဟားဟား” ဆိုပြီး ရေးသားကာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော ရခိုင်ပြန်နယ်မှာတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကူးသန်းသွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသလို ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြန်လာသူတွေကိုလည်း ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ အန်တီနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေများတာကြောင့် အန်တီမှာသာပိုးတွေ့ရင် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကလူတွေအကုန်လုံး ကွာရန်တင်းတန်းစီဝင်ရောက်ရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးကောင်းကျော်ကတော့ မျှဝေပေးခဲ့တာပါ.. အန်တီမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဦးကောင်းကျော်ရေ..
Source – U Kaung Kyaw
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Kaung Kyaw, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ကောင်းကျော်, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post နောက်လ (၉) ရက်နေ့မှာ စုဆောင်းထားတာလေးတွေနဲ့ မိန်းမတင်တောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် Nine One
Next post ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကို မျှဝေလာတဲ့ ညိုမင်းလွင်